तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल मंसिर ११ गते, मंगलबार। | Ekhabar Nepal
धार्मिक मंसिर ११ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल मंसिर ११ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१८ नोभेम्बर २७ तारिख। नेपाल संवत् ११३९ कछलागा। मार्ग कृष्णपक्ष। तिथि– पञ्चमी,
अवसर प्राप्त भए पनि बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। भेटघाट र खानपानमा समय व्यतीत हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग पुनर्मिलन हुनेछ। आफ्नो स्वामित्वका वस्तुमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ। केही कठोर निर्णय लिनुपरे पनि चिताएको काम सम्पादन हुनेछ।
परिश्रम धेरै गर्नुपरे पनि प्रतिफल कम मात्र प्राप्त हुनेछ। भैपरी आउने खर्चले धन अभाव हुनेछ। समय दिन नसक्दा बन्न लागेको काम रोकिन सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ। खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। आम्दानीका स्रोत भने कमजोर बन्न सक्छन्।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। थोरै लगानीबाट पनि मनग्गे नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पढाइमा प्रगति हुनेछ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने योग छ।
पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने प्रयत्न गर्दा उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि समय दिन नसक्दा पछि परिनेछ। पहिलेका कमजोरीमा भने सुधार आउनेछ। नियमित काममा अलमलिनुपर्दा नयाँ क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकिएला। तापनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि हौसला प्रदान गर्नेछ।
स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ भने न्यून उपलब्धिका लागि अलमल हुनेछ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले नयाँ काम रोकिन सक्छ। समयको तालमेल नमिल्दा योजना पूर्ण नहुन सक्छ। अवसरका लागि जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। गोपनीयतामा भने विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। चिताएको काम तत्काल सम्पादन नभए पनि पछिका लागि सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ।
मनोरञ्जनमा अलमलिँदा लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। रमाइलो क्षणमा पनि मन उदास रहनेछ। केही अप्ठ्यारा परिस्थिति आउनाले सोचेको लाभ नमिल्न सक्छ। आफन्तसँग जोगिएर काम लिनुपर्ला। निम्तो प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। वादविवादले यात्राका क्रममा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
कुम्भ - (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) सहयोगीहरू पछि हट्नाले काममा केही समस्या पर्नेछ। वैधानिक प्रावधानले अप्ठ्यारो पार्नेछ भने अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ। व्याहारिक कामले पनि लक्ष्यमा पुग्न समय लाग्नेछ। प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् भने मिहिनेतले विशेष जिम्मेवारी दिलाउनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले साहसी काम गरेर लाभ उठाउन सकिनेछ। प्रतिपक्षीसमेत सहयोगी बन्नेछन्।
अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला। लगनशीलताले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। रकम तथा भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ। शत्रुभाव राख्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन्। बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।